Bahamas · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Bahamas
Anguilla30 Desambra 2021
Barbady12 Janoary 2020
Mediam-bahoaka16 Oktobra 2019
Barbady 01 Janoary 2020
Mahatsiaro ny rivodoza Gilbert i Jamaika, fa vonona hiatrika an'i Dorian ve ilay nosy?
Jamaika 01 Oktobra 2019
Hita ho miharatsy ny vokatra ateraky ny rivodoza ao Karaiba ka efa tsy fotoana andaniana resaka intsony izao ary mihavay an-dohan-draharaha ny toe-javatra.
Nosy Virijiny Amerikana 08 Septambra 2019
Hafanàm-po nomerika 08 Septambra 2019
Paragoay: Fanehoankevitra hafa an'ireo Bilaogera manoloana ny Fandresen'i Lugo
Amerika Latina 10 Febroary 2019
Taorian'ny fandresena goavana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany, nanome ny eritreriny momba ny fanantenany amin'ny governemanta vaovao an'i Fernando Lugo ireo bilaogera sasany ao an-toerana, ny sasany kosa mijery ny fe-potoam-piasan'ny filoha teo aloha, Nicanor Duarte. Ny hafa kosa midera ny fandresena ny Antoko Colorado efa nandrasana hatry ny ela.
Bahamas: Eritreritra momba ny fifidianana
Fifidianana 18 Septambra 2018